5 Day Trips From kuRoma Yekudzidza Italy | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Day Trips From kuRoma Yekudzidza Italy
Roma ndiro guta naka, asi dzimwe nguva mumwe mufambi chaizvo zvishoma-siyana. Vaya kugara muRoma refu zvakakwana kuongorora kuti dai kuva tarisa munharaunda, wo. sezvinei, ndizvo nzendo zuva tiri! Kufunga kuti zvakanaka kunofambidzana muRoma nechitima pamwe munzvimbo dzakawanda, chikuru dambudziko iri kusarudza kuenda kupi. zvisinei, isu makagadzira mazita kukubatsira kuita izvozvo. Heano 5 Mazuva Ekufamba Kubva kuRoma Kuongorora Italy izvo chero mufambi anonakidzwa!
1. A Day Trip To womuOstia Antica
womuOstia Antica ane yokugara wekare kumativi 30km kubva kuRoma. Kare mumazuva Antiquity, guta rino aiva chikuru chengarava muRoma uye pane zvakawanda kuona pano. Semuyenzaniso, unogona kutarisa kushamba yeruzhinji neyemhando dzakanaka.
Uyezve, panewo yemitambo uye mukuru mumugwagwa. Matongo ane dzasara shomanana zvinokosha netemberi, wakadai souya zvakatsaurirwa kuna Hercules.
Imwe Day Trips kubva kuRoma kuti isu anoratidza zviri Tivoli, ari kufarira guta kupukunyuka weRoma Hadrian muzana remakore rechipiri AD. akavaka Hadrians Villa muguta rino yakanaka pedyo, raakanga dzakaguma vade kupfuura yaaigara muRoma.
Sezvo mukuru rudekaro nzvimbo, Hadrians Villa muna Tivoli ane mapindu uye mumaraibhurari, uye akazova guta pacharo. Nhare netemberi vari inonakidza chikamu rwokuparidza, izvo zvichaita kuti kwenyu rwendo zuva kuna Tivoli zvakakodzera.
Rome kuna Tivoli Zvitima
Tivoli kuRoma Zvitima
Perugia kuna Tivoli Zvitima
Orvieto kuna Tivoli Zvitima
3. Day Trips From Rome To Bracciano
Ndomuka chitima pashure neawa refu tasva kubva kuRoma, uye iwe uchange akasvika Bracciano. This naka Ages dhorobha pamhenderekedzo Bracciano Lake ane zvakawanda zvinotyisa pfupiro. Semuyenzaniso, unogona kutenderera Orsini Odesalchi Castle, iyo yaive nzvimbo yekugara yemachinda mazhinji.
chiizve, ichi neimba akanaka aivawo nzvimbo Katie Holmes akaroora Tom Cruise mu 2006. Mukuwedzera, unogona kutenderera Braccianos Church, iyo yakavakwa munguva yeMiddle Ages nguva.
Rome kuna Bracciano Zvitima
Bracciano kuRoma Zvitima
Bracciano kuna Manziana Zvitima
Santa Marinella kuna Bracciano Zvitima
Sezvo guta zvikuru munhoroondo kukosha, Naples ndiye anofanira kushanyira munhu wose achitarisa kuwana Itari uye kutora Day Trips kubva kuRoma. Views peGomo reVesuvius, zvinoshamisa akitekicha, uye kwoushamwari, ushamwari veko mimwe chikuru zviri muguta. zvisinei, Naples ndiye yakakurumbira sezvo nzvimbo yechizvarirwo kuti Pizza Margherita. Chii chimwe, unogona kushanyira pizzeria apo vakaita pizza wokutanga - Antica Pizzeria PortAlba.
Our chokupedzisira pfungwa nokuda Day Trips kubva muRoma Florence, izvo angaita kuti zvishoma kure rwendo zuva. zvisinei, zviri nyore uye nokukurumidza svikika Via chitima. And chete achiona enhoroondo, architecturally enchanting Pakati Florence achaita rwendo zvakakodzera. Duomo dari firence ndiye yakakurumbira Florence Church, izvo zvakakwana showcases yakare Kutarira reguta. Kushanyira Florence pazuva rwendo kubva kuRoma iguru nzira Sunga zororo renyu.
Zvose izvi nzvimbo pedyo Rome munokosha kushanyira. Kana muchitsvaka vakakwana zuva rwendo, tora chaunofarira uye uende. Zviri nyore!
Agadzirira yenyu Italian ushingi? Rongedzai mabhegi ako, ronga zororo mabasa, uye Book Your Train Tickets nenguva!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Day Trips From kuRoma Yekudzidza Italy” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-rome-explore-italy%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Masikati travelflorence travelitaly travelrome traveltips